Be no ho diso fanantenana : ho semban-drahona ny fijerena éclipse eto Antananarivo (NewsMada) | AEMW
Be no ho diso fanantenana : ho semban-drahona ny fijerena éclipse eto Antananarivo (NewsMada)
Ho semban-drahona (ara-bakiteny) ny fahitana ny éclipse solaire annulaire eto Antananarivo. Fantatra mantsy fa hatevina ny rahona mandrakotra ny lanitra tsy ahafahana hianoka tsara amin’ny fijerena io tranga io, araka ny vinavinan’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro eny Ampandrianomby, omaly. Tombana ihany aloha izay fa amin’ny alarobia vao ho fantatra mazava na hitoetra ny rahona ny ampitso na tsia fa ny azo antoka ho maloka ny andro eto an-dRenivohitra. Any Toamasina, sady hanorana no handrivotra be ny tontolo andron’ny alakamisy fotoana hisehoan’ny éclispe solaire annulaire. Hilamina kosa ny any Mahajanga satria manga ny lanitra, ka hazava amin’ny fanarahana ny fanakonan’ny volana ny masoandro.
Tsara toerana indrindra hahita ilay fanakonan’ny volana ny masoandro i Madagasikara amin’ny alakamisy izao. Tsy ho semban-drahona firy ny any Mahajanga.
Eo Androhibe, anelanelan’i Katsepy sy Mitsinjo no toerana mendrika hijerena izany takom-bolana izany. Hanomboka amin’ny 10:57:03 ny fanakonana ary tsy hifarana raha tsy amin’ny 14:29:14. Marihina fa tsy ho maizin-kitroka akory ny andro mandritra ny takom-bolana fa ho matroka fotsiny ihany. Tsy ho takona, araka izany, ny masoandro fa somary kely ny haben’ny volana raha tazanina avy ety an-tany.
Anisan’ny firenena hahita ity takom-bolana ity ny ao atsimon’i Tanzania, Congo, Gabon, Repoblika demokratikan’i Congo, Nosy La Réunion ary ny morontsiraka avaratra atsinanan’i Mozambika.
Efa tomefy olona any Mahajanga sy Toamasina amin’izao fotoana miandry ny fahitana an’io fanakonan’ny volana ny masoandro io. Tsy ny teratany vahiny ihany fa eo indrindra koa ireo Malagasy maro an’isa miandrandra mafy ny hahita izany.
Efa ilaharana ny fividianana ny solomaso eny amin’ny farmasia hahafahana mijery tsara ny takom-bolana amin’io alakamisy io.
Tsy vitsy koa ny manantena fa tokony hatao andro tsy iasana nefa andraisam-bola ny alakamisy satria mila araha-maso ny kilonga madinika, mijanona ao an-trano ndrao hitera-doza ho an’ny maso ny tranga raha tsy manana solomaso izy ireo.
Tatiana sy Vonjy
← Fermeture de l'exploitation aurifère de Vohilava Mananjary (Tribune)
Ambohimangakely : mpitondra môtô maty nodomin’ny Sprinter (NewsMada) →